दक्षिण भारतीय फिल्मकी 'आइटम क्विन' सिल्क स्मिताका जीवनका दश तथ्यहरु
दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सिल्क स्मिता यस्तो एक्लो अभिनेत्री थिईन् जसको नाम मात्रले पनि थुप्रै फिल्महरुले सफलता हासिल गरेका थिए । सन् १९६०, डिसेम्बर २ मा जन्मिएकी सिल्कले केवल १७ वर्षको उमेरमा आफ्नो फिल्मी करियर शुरु गरेकी थिईन् । उनको खास नाम विजयलक्ष्मी थियो तर उनी सिल्क स्मिताको नामले चर्चित भईन् । उनले ४ सय भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् ।
सन् १९९६, सेप्टेम्बर २३ मा उनी आफ्नै घरमा पंखामा झुण्डीरहेको अवस्थामा भेटिएकी थिईन् । उनको जीवनीमा आधारित भएर ३ वटा फिल्महरु बनिसकेका छन् तर उनका जीवनका थुप्रै किस्साहरु पर्दामा देखिएका छैनन् । चर्चा गरौ त्यस्तै केहि किस्साहरु बारे -
गरिबीका कारण पढाई छोड्नु परेको
सिल्कको जन्म एक गरिब तेलुगु परिवारमा भएको थियो । उनका आमा-बुबा अनेक दु:ख कष्ट सहेर परिवारको पालन पोषण गर्दथे । अलिक ठुली भएपछि सिल्कलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गरियो ताकी केहि ज्ञान हासिल गरुन् । तर ४ कक्षामा हुँदा उनले पढाई छोड्नु पर्यो । उनका बुबा-आमाले पढाउन पुग्ने पैसा कमाउन सकेका थिएनन् । फर्किएर सिल्कले घरायसी काम सम्हाल्न पर्यो । त्यतिबेला सिल्क केवल १० वर्षकी थिईन् ।
सानो उमेरमै विवाह
सिल्क उमेरमा सानी थिईन् तर हेर्दा ठुली । समय भन्दा अघिनै उनको शारीरिक विकास यस्तो भयो की उनका बाबु आमानै अचम्मित थिए ।उमेर कम थियो र बुद्धि विवेक पनि त्यहि अनुसारको थियो । उनको शारीरिक विकासको कारण उनका बाबु-आमा सोच्न बाध्य भए र उनको विवाह गरिदिने सोचे र निकै सानो उमेरमा सिल्कको विवाह एक मजदुर युवकसंग गरिदिए । यसरी उनका बाबु-आमाले आफ्नो टाउकोको बोझ हल्का गरे ।
खराब व्यवहारका कारण छोडिन् घर
जुन घरमा सिल्क विवाह गरेर गईन् त्यहाँ पनि उनिसंग राम्रो व्यवहार हुदैनथ्यो । पति जड्याहा थिए । रक्सि खाएर उनि सिल्कलाई पिट्ने गर्थे । कहिले काहिँ उनका देवर र नन्द पनि उनलाई पिट्ने गर्थे । त्यहाँ उनलाई बुझ्ने कोहि पनि थिएनन् त्यसैले उनले घर सम्हाल्न सकिनन् । त्यसपछि उनी घर छोडेर सिधै चेन्नई पुगिन् । त्यहाँ उनले एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्रीको घरमा नोकरको काम शुरु गरिन् । सिल्क बाल्यकाल देखिनै फिल्मको शौकिन थिईन् । मौका मिल्ना साथ उनी आफ्नो दुनियाँबाट हराएर फिल्मको दुनियाँमा पुग्ने गर्थिन् । अभिनेत्रीको घरमा उनले नोकरको काम गरिन्, किनकि उनको इच्छा फिल्ममा काम गर्ने थियो ।
भव्य गाडी देखेर मन बदलियो
सिल्कले घरको काम सानै देखि गरेकी थिईन् त्यसैले उनले अभिनेत्रीको घरको काम पनि खुबै राम्रोसंग सम्हालिन् । बिस्तारै उनले अभिनेत्रीको व्यक्तिगत कामहरुमा पनि सहयोग गर्न शुरु गरिन् । उनले अभिनेत्रीको मेकअप गरेर उनलाई तयार बनाउने पनि गर्न थालिन् । यहाँ काम गर्दा सिल्कलाई अर्को फाइदा पनि भएको थियो । उनले ती अभिनेत्रीलाई भेट्न आउने निर्माता तथा निर्देशकहरु संग पनि चिनजान गर्न थालेकी थिईन् । एक दिन एक चर्चित फिल्म निर्माताको गाडी देखेर सिल्क धेरै प्रभावित भईन् र टाढैबाट गाडीलाई नियाल्न थालिन् । त्यो देखेर उनकी मालिक्नीले व्यंग गर्दै 'यो ठुलो गाडी देखेर कहीं त्यसमा बस्ने सपना त देख्न थालिनस् ?' भनिन् । सिल्कलाई चित्त बुझेन, उनले भनिन् - 'एक दिन म यस्तै गाडीमा बस्नेछु र त्यो मेरो आफ्नै गाडी हुनेछ ।'
काम मिल्नासाथ बनिन् 'आईटम क्विन'
सिल्कले फिल्महरुको लागि अडिसन दिन शुरु गरिन् । उनी अभिनयको स्कुल गएकी थिईनन् न कतै अभिनय सिकेकीनै थिईन् । अडिसन दिँदा दिदै उनले केहि कुराहरु सिक्दै जान थालिन् । एक फिल्मको अडिसनमा उनले देखाएको कामुक अदाका कारण उनले आईटम डान्स गर्ने अवसर पाईन् । उनको अदाले काम गर्यो र बिस्तारै बिस्तारै उनले फिल्महरुमा आइटम डान्स गर्ने अवसर पाउन थालिन् । केहि समयमा नै सिल्क आफ्नो समयको दक्षिण भारतीय फिल्महरुक 'आईटम क्विन' बनिन् । उनको आकर्षण यति तिब्र गतिमा बढीरहेको थियो की एउटा फिल्मलाई हिट बनाउनको लागि उनको डान्सनै काफी थियो ।
एक गीतको लागि ५० हजार लिन्थीन्
त्यसो त सिल्कलाई थुप्रै फिल्महरुमा देखिसकिएको थियो तर सन् १९८० मा आएको तमिल फिल्म 'वंडीचक्रम' ले दर्शकहरु बीच सिल्कको एक अलग पहिचान बनाइदियो । यस फिल्ममा उनी एक रक्सि ब्यापारीको चरित्रमा देखिएकी थिईन् । यसैबाट सिल्कले करियरमा ठुलो छलांग मारिन् र उनी आइटम डान्सको लागि दक्षिण भारतीय फिल्ममा काम गर्ने निर्माता/निर्देशकहरुको पहिलो रोजाई बन्न पुगिन् । त्यस समय सिल्क निर्माताहरु संग एक गीतको ५० हजार सम्म लिने गर्थिन् ।
सन् १९८९ मा 'वंडीचक्रम' को हिन्दि रिमेक पनि बन्यो जसको टाइटल 'प्रेम प्रतिज्ञा' थियो । रिमेकमा मिथुन चक्रवर्ती र माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकामा देखिएका थिए ।
४ वर्षमा करिब २०० फिल्ममा काम
एक आइटम गीतको लागि सिल्कको पारिश्रमिक धेरै भएता पनि निर्माताहरु सधै तयार नै हुन्थे । उनीहरुलाई थाहा थियो की सिल्कको एक आइटम डान्सले मात्र पनि फिल्म हिट हुन सक्छ । सिल्कको नाम दिन प्रतिदिन चर्चित हुदै थियो । यसैको कारणले फिल्म उद्योगमा पाइला टेकेको ४ वर्षमा नै उनले करिब २०० फिल्ममा काम गरिन् । अब उनको नाम आइटम डान्समा मात्र सिमित थिएन । उनले फिल्ममा केहि छोटा-छोटा र कहिले कहीं ठुलै भूमिकामा पनि काम गर्न थालेकी थिईन् । तमिल फिल्म उद्योगमा कमल हसन र रजनीकान्तसंग सिल्कले धेरै कामहरु गरिन् ।
फिल्मको कथाको रंगनै बदलिदिईन्
सन् १९८३ मा आएको हिन्दि फिल्म 'सदमा' बाट सिल्कले हिन्दि फिल्म उद्योगमा कदम राखिन् । यस फिल्ममा उनको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै मानिएको थियो । यो फिल्म सन् १९८२ को तमिल फिल्म 'मुन्दरम पिराई' को रिमेक थियो । फिल्मका निर्देशक बालू महेन्द्रलाई फिल्मको कथा एकदमै सुस्त लागेको थियो । उनी यसमा तडक भडक मिसाउन चाहन्थे जसका लागि उनले फिल्मका मुख्य कलाकारहरु कमल हसन र श्रीदेवी बीच केहि बोल्ड दृश्य खिच्ने विचार गरेका थिए । तर यो सम्भव भएन र विकल्पमा उनले फिल्ममा सिल्क स्मितालाई लिए । सिल्कले फिल्मको दु:खपूर्ण कथामा पनि रंग भरिदिईन् ।
रक्सिको नशामा परेर ज्यान फालिन्
सयौं फिल्महरुमा काम गरिसकेपछि उनको करियर ओरालो लाग्ने क्रममा थियो । खासमा दर्शकहरु उनको एकै किसिमको कामबाट दिक्दार भईसकेका थिए । त्यसपछि उनले अभिनय छोडेर फिल्म निर्माणमा हात हालिन् । यसैबीच उनले एक डक्टरसंग विवाह पनि गरिन्, जसको मद्दतमा उनले फिल्महरु निर्माण गर्न थालिन् । तर जसरि दर्शकहरुले उनलाई अस्विकार गरेका थिए त्यसरीनै उनले बनाएका फिल्महरुमा पनि कुनै दम थिएन । आफ्नो करियर देखेर सिल्क अत्यन्तै निराश बनिन् र उनले सबैसंग दुरी बढाएर रक्सिको नशामा मात्र डुब्न थालिन् ।सन् १९९६, सेप्टेम्बर २३ मा उनी आफ्नै घरमा पंखामा झुण्डीरहेकी भेटिइन् । प्रहरीको छानबिनमा उनको मृत्युलाई आत्महत्याको नाम दिईयो र केस बन्द गरियो ।
सिलको जीवनमाथि बने तीन फिल्महरु
सन् २०११ मा एकता कपूरले सिल्कको जीवनमा आधारित फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' निर्माण गरिन् । यस फिल्मलाई मिलन लुथरियाले निर्देशन गरेका थिए भने सिल्कको भूमिकामा अभिनेत्री विद्या बालनले अभिनय गरेकी थिईन् । यो फिल्म सिल्कका भाई वी. नागवारालाई मन परेन र उनले यो फिल्म सिल्कको जीवनीमा आधारित नभएको बताए । त्यसपछि कन्नड भाषामा 'डर्टी पिक्चर - सिल्क सकत हट' नामको फिल्म बन्यो । यस फिल्ममा सिल्कको भूमिकामा पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मालिक देखिईन् । मलायलम भाषामा पनि 'क्लाइम्याक्स' नामको फिल्म बनाइयो जहाँ सिल्कको भूमिका साना खानले निर्वाह गरेकी थिईन् ।
(स्रोत : अमर उजाला)